Ny dia mahomby amin'ny varotra | Martech Zone
Nandritra ny folo taona nanampiana ireo orinasa hampivelatra ny orinasan-tserasera dia nohamafisinay ireo dingana hiantohana ny fahombiazana. Matetika kokoa noho izany dia hitantsika fa miady amin'ny marketing nomerika ny orinasa satria manandrana mitsambikina mivantana izy ireo fa tsy mandray ny dingana ilaina.
Fanovana dizitaly nomerika
Ny fanovana marketing dia mitovy amin'ny fanovana nomerika. Ao amin'ny fanadihadiana data avy amin'ny PointSource - fanatanterahana fanovana nomerika - ny angona nangonina avy amin'ireo mpanapa-kevitra 300 amin'ny Marketing, IT, ary ny Operations dia manondro ireo tolona ataon'ny orinasa amin'ny fanatsarana ny sain'ny mpampiasa farany. Hitan'izy ireo fa ireo orinasa ireo:
Tsy fahampiana voafaritra mazava tanjona sy ny lalana - 44% amin'ireo orinasa ihany no milaza fa matoky tanteraka ny fahaizan'ny orinasan-dry zareo hanatratra ny vina hitomboany ary ny 4% dia tsy matoky tena mihitsy.
Ady hampivondrona ireo traikefa niomerika an-tsokosoko - Ny 51% amin'ireo orinasa ihany no milaza fa miatrika ny filan'ny mpampiasa manokana manerana ny sehatra rehetra ny fikambanan'izy ireo
Manana fisainana lova izay mamorona sakana amin'ny fanovana dizitaly - 76% amin'ireo orinasa no milaza fa mifaninana amin'ny sampana hafa ao amin'ny fikambananany ho an'ny loharano sy / na teti-bola ny departemanta misy azy ireo.
Miasa amin'ny rafitra lany andro izay manakana ny fahafaha-manatsara ny traikefa nomerika - 84% no milaza fa ny fikambanan'izy ireo dia manana rafi-lova tsy mitovy izay misy fiatraikany amin'ny hafainganan'ny fivelaran'ny traikefa nomerika vaovao
Ireo no fandrahonana ho an'ny orinasanao satria manantena ny hanova ny varotra nomerika ianao. Manana mpivarotra ambongadiny lehibe ao amin'ny faritra izahay izay mila fanampiana amin'ny marketing nomerika ataon'izy ireo. Hitanay ny fotoana iray tsy mampino ho azy ireo hampihatra rafitra ecommerce vaovao izay natambatra tamin'ny fivarotan'izy ireo. Saingy, ny mpitarika dia nibolisatra tamin'ny fandaniam-bola rehefa nanangana tahiry fananana sy teboka amin'ny rafitry ny varotra izay nitentina am-polony tapitrisa dolara nandritra ny taona maro. Nilaza izy ireo fa ny fampiasam-bola amin'ny teboka vaovao amin'ny varotra, ny lisitra ary ny rafitra fanatanterahana dia tsy tao anatin'ny fifanakalozan-kevitra.
Ny valiny dia ny mety tsy hisian'ny fampifanarahana na fampidirana eo amin'ny varotra an-tserasera sy ivelan'ny Internet. Niala tamin'io fanantenana io izahay taorian'ny fivoriana maro nampanantenaina - tsy nisy fomba hahatratrarantsika ny valin'ny fitomboana izay nantenain'izy ireo nomena fetra henjana ny rafitr'izy ireo. Tsy dia manana fisalasalana kely aho fa anton-javatra lehibe teo amin'ny tolona nataon'izy ireo izany - ary efa nametraka fatiantoka izy ireo taorian'ny nijerena ny fihenan'ny orinasan'izy ireo nandritra ny taona maro.
Raha manantena ny hampifanaraka sy handresy ireo fanamby ireo ny orinasanao dia tokony handray izany ianao marketing marketing dingana. Tsy vaovao izany, nifampizara izahay fomba fiasa mailaka mailaka taona vitsivitsy izao. Saingy rehefa mandeha ny taona, ny fiantraikan'ny fizotry ny varotra tsy miovaova dia manohy manimba hatrany ny orinasa. Tsy ho ela dia tsy misy dikany ny orinasanao.
Ireo fambara amin'ny fampiasa fototra nivelatra ho an'ny orinasa nomerika, anisan'izany ny fahatsiarovan-tena, fandraisana andraikitra, fahefana, fiovam-po, fitazonana, upsell, ary ny traikefa. Ao amin'ny sary vaovao farany nataonay, dia nasianay sary ny dia izay alehanay alohan'ny mpanjifanay mba hahitan'izy ireo ny fahombiazan'izy ireo. Ny dingana amin'ny Agile Marketing Journey dia misy:
Optimization - Jereo ny wormhole mahafinaritra nampidirinay tao amin'ny infographic izay mandray ny paikadinay mitombo ary mamindra azy io hiverina any amin'ny Discovery indray! Tsy misy vita ny Fitsangatsanganana haingam-barotra. Raha vantany vao novonoinao? Ny paikadim-barotra dia tsy maintsy mandinika, mandrefy, manatsara sy mampifanaraka azy ianao amin'ny fotoana hitohizany hanamafisana ny fiantraikany amin'ny orinasanao.
Ataovy ao an-tsaina fa ity ny dia ankapobeny, fa tsy torolàlana amin'ny fampiharana sy fanatanterahana marketing marketing paikady. Loharano iray misy pitsopitsony tsara ao amin'ny ConversionXL's Ahoana ny fampiharana ny scrum amin'ny varotra mailaka.
Te hampiseho fotsiny ny fifandraisana misy eo amin'ny dingana lehibe amin'ny dianao sy ireo anton-javatra tokony hojerena rehefa mandehandeha eny amin'ny tontolon'ny marketing nomerika ianao. Manantena aho fa nankafizinao ity sary ity toy ny nankafizinay tamin'ny fiasa tamin'ny volana lasa! Io no fototry ny fifandraisan'ny mpanjifa rehetra.
Izaho koa dia nanamboatra Worksheet ho an'ny Marketing Initiative hanampy anao handrafitra ny ezaka varotrao ary hiantohana ny fampifanarahana amin'ny tanjon'ny orinasa ankapobeny.
Ampidino ny takelaka fanombohana marketing
Aza hadino ny manindry ny kinova iray manontolo raha sahirana ianao mamaky azy!
Tags: marketing marketingdia mailaka mailakamaodely marketing mailamailakafizotry ny varotra mailamailakafahefanafanentananafiovam-poFanovàna dizitalybaovaoandraikitrafamonoanatraikefafampiharanadiamethology marketingmaodely marketingmodelyOptimizationdinganafihazonanatetikafiovanaupsell